I-HOLDO YENYE YEZONA NDAWO NDIZITHANDAYO 'ZEJEDI YOKUGQIBELA' - IDABI LEENKWENKWEZI
Enye Indlela Yamandla
I-Vice Admiral Holdo yenye yeenxalenye zam endizithandayo zeJedi yokugqibela
Ngempelaveki kubhiyozelwa isikhumbuzo sonyaka omnye se IJedi yokugqibela, h I-ost ye-Forever Star Wars ipod kunye nombhali onegalelo kuClashing Sabers babhale i-tweet becela abanye abantu ukuba baphinde babhale kwakhona ukuba umlinganiswa ka-Amylin Holdo ovela IJedi yokugqibela , Njengokudlalwa nguLaura Dern, kwakuthetha okuthile kubo njengomlinganiswa.
Andiqhelekanga ukwenza oku kodwa ndidiniwe ngumntu ongathandanga umbono weHoldo. Kulungile ukuba ungamthandi kodwa ungacingi ukuba wonke umntu uziva ngokufanayo.
Phinda ubhale ukuba u-Amylin Holdo uthetha into kuwe njengomlinganiswa. pic.twitter.com/PDPfufGVan
- FaLaLaLaLa Iimfazwe zeNkwenkwezi & # x1f384; (@kwinday) NgoDisemba 15, 2018
Kulindeleke ukuba kubekho amagqabantshintshi aqinisekileyo, kodwa bekukho nabantu ekufuneka nje bachaze into ebhalwe gwenxa, uMary Sue, ubulungisa kwezentlalo, njlnjl. Ngoku, ndiyayiqonda loo nto IJedi yokugqibela yingxowa exubekileyo yabantu abaninzi kwaye ndinokuzingca ndisithi ndinayo I-TLJ abazondayo kunye nabathandi kumgca wexesha lam. Oko kuthethiweyo, bendihlala ndiliQela I-TLJ ilungile kwaye inwenwela kumlinganiswa we-Holdo, nantsi impendulo yam kule tweet.
Isigcawu-indoda egodukayo yokuvuza
Ukususela kumzuzu wokuvela kwakhe kwifilimu ndaziva ndithandana kakhulu noHoldo, ikakhulu kuba kwakumangalisa ukubona umntu obhinqileyo ebekwa kwigunya emva kukaGeneral Leia.
Xa uPoe ebona uHoldo, enamathandabuzo ngobuchule bakhe kunye nobukrelekrele bakhe, kwaye kum, kwasekuqaleni, ndaziva ngathi uRian Johnson wenza inqaku elinamandla kakhulu ngendlela esijonga ngayo ubunkokheli babasetyhini. Ndiyazi ukuba abantu abaninzi bayafana: Kutheni angazange axelele nje uPoe okanye omnye umntu icebo?
Ewe, impendulo ilula: Abavukeli, basikelele iintliziyo zabo, babi ngokunamathela kwizicwangciso kunye nokuqonda umdlalo omde. Sibona kwi KAKHULU ukuqala kwe-movie ukuba iPoe ayithobeli kwaye icime i-headset yakhe ngexesha lokuhlaselwa nguLeia ngokucacileyo wamxelela ukuba angazibandakanyi nayo, eyabashiya benamandla okulwa kwaye yabangela ukufa kwabantu abaninzi.
Kuthatha okuncinci kakhulu kuye wonke umntu ukuba alahle ukholo kwi-Holdo yokuhlala ezolile kwaye unamathele kwimipu yakhe ngokugcina isicwangciso sakhe sikufutshane nevesti. Isizathu sokuba sicace-ukuba wayebaxelele ukuba uzimisele ukufela enqanaweni, ngebe bazamile ukumnqanda. Poe ngekhe wazama ukumnqanda kuba ungumntu ongxamisekileyo okholelwa ukuba wazi ngcono. Oko kwabonakala kwasekuqaleni.
Umyalelo wokuQala ulawula ngenxa yoloyiko nokoyikisa nangona iinkokheli zawo zingxola kwaye zingenabuchule bentsana zamadoda-jonga i-Hux's petar snarls kunye ne-Kyle Ren's tears of nepotism angst. Imizamo ye-Holdo yokulawula ngokholo kunye nokuzincama kunokuba neendlela zokuhlasela kwaye uvule ngokupheleleyo. Oko kwenza ukuba abantu bangamthembi kuba kwakhona, ngaphandle kwedumela lakhe, bayamthemba uPoe ngakumbi. Poe abathi, kwakhona, babulala amaqabane abo kuhlaselo oluye lwatshabalalisa inqanawa yemfazwe, ewe, kodwa babashiya bengenako ukuzikhusela ngezinye iindlela. Ukuba uLuka noRey babengakhange babonakalise ukuba ngebabhubhile.
U-Holdo wayengenguye umlinganiswa ogqibeleleyo kuba, ukongeza ekubeni ngumlinganiswa, wayemele ukungathembani esinakho ngegunya labasetyhini. Xa amadoda okanye abaqeqeshi bethetha ngokuba nokholo nokubathemba naxa kukho into ebonakala ingafikeleleki, sifundisiwe ukubathemba kuba amava abo abalulekile.
Inyaniso yokuba uLeia wayethembele uHoldo ayibalulekanga kubavukeli kwaye iyadanisa kwaye zizenzo zePoe ezikhokelela ... ekufeni okungakumbi. Ke ngelixa wonke umntu ebuza: Kutheni le nto uHoldo engakwenzanga oku? Kutheni singabuzi ukuba uPoe ukwenze njani oku kude emkhosini ukuba unengxaki yokuphulaphula nokuthatha ii-odolo kumagosa akhe aphezulu? Poe waye gwenxa kwaye ngandlela thile uHoldo nguye obefuna ukutshintsha amaqhinga?
Kodwa ngaphezulu kwazo zonke ezi zinto, ndiyayonwabela iHoldo kuba yona, njengoRose, inika abafazi enye indlela yokuba bomelele. Ngengubo yakhe ende ye-lavender kunye neenwele eziqaqambileyo, iinzipho ezipholileyo kunye nobucwebe, uHoldo ubonakalisa ukuba kukho iindlela ezahlukeneyo zokuba ngumfazi oligorha elinamandla. Oko kuyinyaniso kuwe kwaye isitayile sakho asikwenzi ukuba ube phantsi, ilungelo lokuba ngumntu ozimeleyo yile nto bayilwelayo abavukeli. Kananjalo ukuba uyamjongela phantsi ... oko kukokwehla kwakho.
Ndingathi ukuba ufuna ukufunda ngakumbi ngeHoldo, funda ifayile ye Leia, iNkosazana yaseAlderaan Incwadi kuba yazisa uHoldo omncinci kwaye amagama akhe okuqala ngala: Ndiyathemba ukuba iyingozi. Ndifuna ukukhululeka ngakumbi ngokusondela kunye nokungaqiniseki kokufa.
(umfanekiso: Disney / Lucasfilm)
I-Avatar Yomoya Wokugqibela
Kutheni wonke umntu ebhaka isonka
umlingo wesikolo ibhasi abantwana ukapteni weplanethi
unobumba ngamnye kuphawu olunye
I-American horror story coven yefashoni
Umartha kent batman vs superman
steven iphela efungile kwikrele